Wararka Maanta: Khamiis, May 17, 2012-Dood-cilmiyeed looga hadlayay xiriirka Waalidka iyo Macallinka u dhexeeya oo lagu soo gabgabeeyay Muqdisho
Dooddan oo ay soo qabanqaabisay hay'adda CCD ayaa looga dooday doorka kaga aadan macallinka tarbiyeynta caruurta iyo sidii waxbarashadooda uu u ilaalin lahaa, iyadoo lagu dhaqamayo sunnada nebigeena Muxamed (NNKH), waxayna dooddu ahayd mid ay fikrado isku weydaarsadeen dadkii ka qaybgalay.
Sheekh C/qaadir Sheekh Soomow oo doodda furay ayaa sheegay in xiriirka waalidka iyo macallinka u dhexeeya uu noqdo mid adag, isla markaana xushmad la gaar ah uu yeesho macallinka, isagoo soo qaatay sida macallimiinta dugsiyada Qur'aanka ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda xushmad weyn.
"Macallinka wuxuu abaalmarin u heli jiray xoolo nool markuu cunugga u dhemeeyo barashada Qur'aanka, laakiin hadda taas ma jirto, macallinka waa la kareyn jiray, wuxuu ahaa aabbihii labaad ee cunugga, balse taasi hadda ma jirto waayo waxaa meesha ka baxay xiriirkii u dhaxeeyay macallinka iyo waalidka," ayuu yiri Sheekh Soomow.
Sheekh Axmed Shuqul oo isna meesha ka hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya waxa ugu weyn ee ay lahayd uu ahaa diinka iyo caruurta, hase ahaatee maanta intiiba la bedelay, isagoo xusay inay soo baxeen macallimiin diinta bedelay oo caruurta marin habaabinaya.
"Hadda waxaa soo baxay macalin ku sheeg ilmaha lagu aaminay si qaldan diinta u baraya, ardaydii ama ilmihii waxaa la baray waxaysan dhaqan u lahayn, sida in la baro hubka, taasna waa in waalidka ka feejignaadaan," ayuu yiri Sheekh Shuqul.
Sidoo kale, waxaa doodda hadal ka jeediyay Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan isagoo khudbaddiisa kaga hadlay waajibaadka macallinka ka saaran ardayga, isagoo xusay in macallinku yahay waalidka labaad ee ardayga uuna saaran yahay waajib weyn oo ah dhinaca waxbaridda, balse in hubka la baro waa mid aan meesha ku jirin.
Sheekh Muuse Cagaweyne oo isna doodda ka hadlay ayaa sheegay in looga baahan yahay waalidka inuu si gaar ah ula socdo waxbarashada caruurtiisa, isla markaana uu koontaroolo waxyaabaha dugsiyada lagu barayo.
Waalidiintii doodda goobjoogga ka ahaa ayaa waxaa u hadlay, Sheekh Maxamed Cabdi Ibraahim oo sheegay in la sameeyo dallad isku xirta macallinka iyo waalidka, si ubad toosan loo helo si aan caruurta loogu adeegsan qarrib.
Ugu dambeyn, dood-cilmiyeedkan oo ahaa mid aaraa kala duwan la isku dhaafsaday ayaa kusoo xirmay jawi is-afgarasho ah, iyadoo waalidiintii iyo macallimiintii goobta joogay ay si wanaagsan iskula garteen in xiriirkooda uu wanaagsanaado.